को को काहाँबाट मुख्यमन्त्रीको लागि दौडधुप गर्दै | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रदेश सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको प्रस्ट बहुमत छ भने केन्द्रको समेत सिट जोडदा दुई तिहाइ पुग्छ ।
मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इञ्चार्ज सचिव भीम आचार्य, पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेशका सहइञ्चार्ज शेरधन राई अहिले काठमाडौंमै छन् ।
राजपाबाट उपमुख्यमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व सप्तरीका नवलकिशोर साह, बाराका जितेन्द्र सोनल र सर्लाहीका रामनरेश रायमध्ये एकले गर्नेछन् । सप्तरीका साह अन्य सांसदभन्दा सिनियर भएकाले दौडमा अगाडि छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस महिला हिंसाका ती १० प्रथाः सती प्रथा, आराले चिर्ने देखी योनीच्छेद, सुन्दा पनि आङै जिरिंग हुन्छ !
सभामुखका लागि भने कोही अघि सरेका छैनन् । पार्टीको आन्तरिक भेलामा पनि कसैले नाम चर्चामा ल्याएनन् । ‘सभामुखका लागि हालसम्म कोही आकांक्षी देखिएका छैनन्,’ राजपा स्रोत भन्छ, ‘पार्टीले जसलाई जिम्मेवारी तोक्छ, उही अगाडि सर्ने हो ।’ मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका फोरमका गद्दी पर्सा १ ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका हुन् । पूर्वसांसद समेत रहेका गद्दी प्रखर वक्ता मानिन्छन् । पार्टी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारी पक्षसँगको वार्तामा उनैले सहभागिता जनाएका थिए । सिरहा २ ‘ख’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित यादव सिरहा २ बाट ०६४ मा सभासद निर्वाचित भएका थिए । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग उनको निकट सम्बन्ध छ । विजय यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउनै पार्टीले सिरहाबाट एक जनालाई पनि समानुपातिक कोटामा नराखेको फोरम स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो दशकका अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वका आन्दोलनबाट उठेका आकांक्षाहरू व्यवहारतस् सम्बोधनको तहमा पुगेका छन् । एक मात्र मधेसी बहुल प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनले बहुमत सिट जितेका छन् । प्रदेशसभाको ६४ सिटमध्ये मधेसी गठबन्धन ९संघीय समाजवादी फोरम २० र राष्ट्रिय जनता पार्टी १५० को ३५ सिट छ । वाम गठबन्धनले ९एमाले १२ र माओवादी केन्द्र ७० १९, कांग्रेसले ९ र एक सिट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।
प्रदेश २ मा ७३ समानुपातिक सिट छ । कुल १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ सांसद चाहिन्छ । मधेसी गठबन्धनले कांग्रेस र वाम गठबन्धनको सहयोगबिना नै सरकार बनाउन सक्छ ।
३ नम्बर प्रदेशमा एक्लै सरकार बनाउने हैसियतमा रहेको एमालेले कसलाई मुख्यमन्त्री उम्मेदवार बनाउला, सर्वत्र चासो छ । पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ भने अन्य दुई नेता पशुपति चौलागाईं र राजेन्द्र पाण्डेले पनि आफूहरू मुख्यमन्त्री दाबीकै लागि प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको बताइरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रदेश ३ को पहिलो संसद बैठक सम्पन्न, अन्तरिम कार्यविधि पारित
उता कांग्रेसमा पनि संसदीय दलको नेताका लागि पुराना नेता नवलपरासीका कृष्णचन्द्र नेपालीको नाम चर्चामा छ । त्यसैगरी, कास्कीका विन्दुकुमार थापाको पनि नाम लिन थालिएको छ । संसद्मा कांग्रेसका ६ प्रत्यक्ष र ९ समानुपातिक गरी १५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री एमालेबाटै हुने सम्भावनाले माओवादीका सांसदहरू सभामुख र मन्त्रीका लागि दौडधुपमा छन् । यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् ।
प्रदेश ५ मा वामबाट पोखरेल निर्विकल्प
प्रदेश ६ मा पनि एमाले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको भन्दै प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेतामा यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वालाको दाबेदारी छ भने माओवादी केन्द्रबाट महेन्द्रबहादुर शाही र झपट बोहराको नाम मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस राष्ट्रपति भण्डारीले महानवमीको शुभदिनमा गरिन् नवकन्याहरुको पूजा
तराईका भूमिपुत्र भनिने थारू समुदायबाट प्रदेश ७ को पहिलो मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाले आदिवासी थारू समुदायमा उल्लास छाएको छ । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका वीरभान चौधरीको नाम चर्चामा छ ।
१० जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभामा १४ सांसद छन् । प्रदेशसभामा दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो भने चौधरी मुख्यमन्त्रीका निर्विवाद उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावना देखिएको केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश ७ मा तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसभित्र भने प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि लबिइङ सुरु भएको छ । कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष ४ र समानुपातिक ८ गरी १२ सांसद निर्वाचित छन् । प्रदेश संसदीय दलको नेतामा डिल्लीराज पन्त, देवराज पाठक, गोविन्द बोहरा, डा। रणबहादुर रावल, कर्ण मल्ल र भरत खडकाको नाम चर्चामा छ । खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
१०,माघ.२०७४,बुधबार ०८:४८ मा प्रकाशित
← यी हुन रातो पासपोर्ट नबुझाउन डेढ सय पूर्वसांसद (सूची सहित)
हिउँदे वर्षा शुरु: उपत्यकामा जमिन भिज्ने गरी वर्षा हुने, हिमाली जिल्लामा हिमपात ! →